Taangiyada Dowlada Turkiga oo gudaha u galay Siiriya iyo Daacish oo magaalo laga qabsaday	(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Milatariga dowlada Turkiga ayaa gudaha u galay dalka Siiriya gaar ahaan xadka ay labada dal wadaagaan, waxa ayna Ciidamadan guluf colaadeed ku qaadeen Kooxda Daacish oo kusugneed magaalooyin iyo Deegaano kuyaala xadka Siiriya iyo Turkiga.
Taangiyada iyo Diyaaradaha ay wataan Milatariga Turkiga ayaa ka gudbay xadka Turkiga la wadaago dalka Siiriya, waxa ayna Duqeymo culus ku garaaceen goobo ay kusugnaayeen dagaalyahanada Daacish oo kutaala gudaha Siiriya.
Ciidamada Turkiga ayaa taageero siinayay Dagalayahano Kurdiyiin ah oo gacan saar leeyihiin, waxaana dagaalyahanadaasi ay dagaal adag kula wareegeen magaalada Jarablus oo kutaala meel ku dhow xadka Siiriya iyo Turkiga Wadaagaan.
Diyaaradaha Dagaalka Turkiga iyo kuwa Isbaheysiga Mareykanka horkacayaan ayaa duqeyn culus ku garaacay magaalada Jarablus ,kahor inta aysan dagaalyahanada Kurdiyiinta aysan gudaha u galin magaaladaasi kana qabsan kooxda Daacish.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah Kooxda Daacish ee ku sugan xadka Turkiga la wadaago dalka Siiriya, waxa uuna Madaxweynaha cadeeyay in shalay ciidankiisa gudaha u galeen dalka Siiriya kana gudbeen xadka.
Dowlada Turkiga ayaa la wareegida magaalada Jarablus ay la wareegeen Kooxda Kurdyiinta uga gon leh in aagaasi uu noqdo mid amaan ah oo ka caagan Kooxda Daacish oo mararka qarakood halkasai gantaalo kasoo tuuri jiray.
Smoke rises from the Syrian border town of Jarablus as it is pictured from the Turkish town of Karkamis, in the southeastern Gaziantep province, Turkey. REUTERS/Stringer
Dhul gariir ku dhuftay dalka Talyaaniga (Daawo Sawirada)